VaMnangagwa Vokurudzirwa Kushandisa Masimba Avo Kugadzirisa Nyaya YeGukurahundi
Mauto achirova mumwe murume munguva yeGukurahundi
Vamwe vanhu vari kukurudzira mutungamiri wenyika VaEmmerson Mnangagwa nehurumende yavo kuti vasadzamba-dzamba panyaya yeGukurahundi, vachiti vanofanirwa kushandisa masimba avo semutungamiri kuona kuti nyaya iyi yagadziriswa zvachose.
Maonero aya anotevera kukwira kudare reHigh Court neChipiri kwemamwe masangano emuBulawayo, anosanganisira Ibhetshu LikaZulu, nechikumbiro chekuti VaMnangagwa, nemutevedzeri wavo, VaKembo Mohadi, pamwe nevaimbove mutungamiri wenyika, VaRobert Mugabe, vamanikidzwe kuburitsa ongororo yeDumbutshena Commission pamwe neyeChihambakwe Commission izvo zvaive nechekuita neGukurahundi.
Vamwe vataura neStudio 7 vati zvisineyi nedanho rekuenda kumatare rakatorwa nevemasangano aya, zvakakosha kuti VaMnangagwa pachavo vashandise masimba avo semutungamiri wenyika vaone kuti nyaya iyi yagadziriswa.
Mumwe wevane maonero aya ndiMuzvare Abigale Mupambi vesangano re #This Constitution, Our Constitution avo vanoti mutsika dzechivanhu mushonga wengozi kuiripa.
Mumwe mutapi wenhau anoshanda akazvimirira ega, Admire Kudita, anotsinhirawo izvi.
Kudita anofananidza nyika neimba achiti imba ikasavakwa pahwaro hwakasimba inoputsika.
Anoti zvakakosha kuti nyaya yeGukurahundi igadziriswe kuti vanhu vemuZimbabwe vagokwanisa kugarisana zvakanaka murunyararo pasina kufungirana zvakaipa.
Mutauriri webato reZAPU, VaIphithule Maphosa, vaudzawo Studio 7 kuti maonero avo ndeekuti VaMnangagwa vakapotsa mukana wekuratidza chido chavo pakugadzirisa nyaya yeGukurahundi pavakagadzwa kuve mutungamiri wenyika apo vakakurudzira vanhu munyika kuti varegererane, vakoshiwe zvakaipa zvakaita munyika mumakore apfuura.
VaMaphosa vanoti kugadzirisa nyaya yeGukurahundi kwakakosha zvikuru vachitiwo VaMnangagwa vachinawo mukana wekuigadzirisa uye havafanirwe kuita zvakaitwa nevaimbove mutungamiri wenyika VaRobert Mugabe avo vasina kumbobvira varatidza chido chekugadzirisa nyaya iyi.
VaButler Tambo, avo vanoshanda nesangano reCentre for Public Engangement vanoti kuvepo kwemutemo weNataional Peace and Reconciliation Act, uyo wakasainwa kuve mutemo nemusi weChishanu chapfuura, kunopa mukana wekuti nyaya yeGukurahundi igadziriswe.
Vanoti pane kugunun’una kukuru kuri kuramba kuripo kune vanhu vakaurairwa hama dzavo vakati zvakakosha kuti panogadziriswa nyaya iyi pakosheswewo kuedza kusimudzira nzvimbo dzakanyanya kubatwa nenyaya iyi.
Vanhu vanosvika zviuru makumi maviri, vakawanda vavo vari vaive vatsigiri vebato reZAPU, vakaurayiwa mumatunhu eMatabeleland neMidlands panguva yeGukurahundi kubva mugore ra1983 kusvika mugore ra1987 apo pakazosainwa chibvumirano chemubatanidzwa wemapato cheUnity Accord pakati pebato reZanu PF neZAPU.